Maitiro ekushandisa uye kushandisa | Ota Ward Cultural Promotion Association
Kuti ushandise nzvimbo iyi, "Uguisu Net Mushandisi Kunyoresa" inodiwa.Kuti uwane ruzivo, ona "Chii chinonzi Uguisu Net?".
Nzvimbo yega yega inogamuchira mashandisiro ekushandisa nerotari.Kune zvivakwa zvisina vanhu mushure merotari, kunyorera kwese kunozogamuchirwa pane yekutanga-kuuya, yekutanga-yakapihwa hwaro.
Lottery / nzira yekushandisa inosiyana zvichienderana nekamuri yaunoshandisa.Kuti uwane ruzivo, ndapota ona tafura yekuti ungashandisa sei imba yega yega.
(* Muroba ishoko rinomiririra kamuri yega yega yenzvimbo yemusangano, nhandare yebaseball, nhandare yenhabvu, nezvimwe zvepaki nzvimbo.)
Zvemari yekushandisa mashandisirwo uye inowoneka mashandisiro ekushandisa fizi, ona nzvimbo yekutarisisa / peji rezvigadzirwa zveimwe imba
Pamusoro pezvo, ndokumbira ubhadhare mari yekushandisa panguva yekunyorera kuti ushandise uye nemubhadharo wekushandisa usati washandisa kamuri.
Ota Ward Plaza Nzvimbo Yekutanga
Ota Ward Horo / Aprico Chitarisiko
Daejeon Bunkanomori Nzvimbo Yekutanga
Kana ikashandiswa nevechidiki vanopikisa bhizimusi rekutakura boka rekutakura, boka rekusimudzira vechidiki, boka revechidiki, kana boka revanhu vakaremara, uye chiitiko ichi chiri cheruzhinji rwevanhu, mari yekushandisa nzvimbo ichaderedzwa kana kuregererwa.
Kana iwe uri kunze kwewadhi, iwe unozobhadhariswa 20% yekuwedzera pane yakakosha nzvimbo yekuchaja.
(Panyaya yekutengesa zvinhu zvinoshandiswa, hapana chekuwedzera nekuda kwekushandisa kunze kwewadi)
Paunenge uchitengesa zvinhu nechinangwa chekuwana purofiti, 50% yeiyo yekutanga nzvimbo yekuchaja ichawedzerwa.
Ndokumbira kuti uone iwo iwo rondedzero yemutengo weimwe neimwe nzvimbo yezvikamu zveiyo nguva yekushandisa.
Iyo yekushandisa nguva inosanganisira iyo nguva inodiwa yekugadzirira uye yekuchenesa.Kuisirwa uye kubviswa kweaudio-yekuona michina uye zvigadziriso zvinoitwa nevashandi vemu museum zvichaitwawo panguva yekushandisa.
Ndokumbirawo muve nechokwadi chekunyatsoomerera kumagumo mukati menguva yekushandisa.
Kana iwe ukauya nechikafu, zvinwiwa, maruva matsva, kana mukwende kubva kunze, ndapota pinda mukati uye kunze mukati menguva yekushandisa.
Muzviitiko zvinotevera, kushandiswa kwenzvimbo hakugone kubvumidzwa.Uye zvakare, kunyangwe iwe watozvibvumidza, tinogona kukanzura, kudzikamisa, kana kumisa kushandiswa.
Kana paine njodzi yekukuvadza runyararo rwevanhu kana hunhu netsika.
Kana paine njodzi yenjodzi inoitika pachiitiko chinoshandisa zvinhu zvine njodzi.
Kana paine njodzi yekukuvadza kana kurasikirwa nenzvimbo kana zvishandiso zvekuwedzera.
Kana kodzero yekushandisa yaendeswa kana kurerutswa.
Kana zvichizivikanwa kuti zviri mukufarira kwesangano rinogona kuita mhirizhonga, kushungurudza, nezvimwe.
Kana chinangwa chekushandisa kana mamiriro ekushandisa akatyorwa.
Kana nzvimbo yacho ikave isingawanikwi nekuda kwedambudziko kana mamwe mamiriro ezvinhu.
Kana paine dambudziko rehutungamiriri munzvimbo, senge pakuita ruzha rukuru.
* Magetsi emagetsi haakwanise kushandiswa nekuti ruzha uye gasi rekudzimisa moto zvinokanganisa nharaunda.
Shanduko uye kukanzurwa kwezuva rekushandisa
Kana paine shanduko muzuva uye nenguva yekushandisa, nzvimbo yekushandisa, nezvimwe, unogona kushandura maitiro.Ndokumbirawo unyore shanduko mukati menguva yekugashira kunyorera yakatarwa kune yega nzvimboNdokumbirawo urege kuchinja zvekare kana kudzima mashandisiro mushure mekushandura zuva rekushandisa, nezvimwewo, nekuti zvinogona kukonzera kusagadzikana kune vamwe vashandisi.
* Shandisa kubvumidzwa, risiti, uye chisimbiso chemunhu anenge achinyorera (stamper-mhando chisimbiso hachibvumirwe) zvinotarisirwa kunyorera.
* Zvikumbiro zvichagamuchirwa chete kunzvimbo yauchange uchishandisa.
Kunyorera kunyorera nguva
Horo hombe / horo diki / imba yekuratidzira Zuva rekushandisa
1 mavhiki apfuura
* Panyaya yechikamu chechishanu che studio yemimhanzi, kusvika na5: 7 masikati pazuva racho Pazuva racho
Usati washandisa nguva
Horo, yakawanda nzvimbo, yekuratidzira kona, yakavhurika nzvimbo Zuva rekushandisa
* Mangwanani, mune yechikamu chekutanga, kusvikira zuva risati rasvika zuva rekushandisa Pazuva racho
Kubata kwemari yekushandisa nekuda kweshanduko kana kukanzurwa
Kunyangwe kana murongi akarega basa nekuda kwemamiriro ake ezvinhu, mari yekushandisa yakabhadharwa haigone kudzoserwa mushe.Nekudaro, kana kukanzurwa kukakumbirwa uye kubvumidzwa zuva risati rasarudzwa, mari yekushandisa nzvimbo ichadzoserwa seinotevera.
* Kana iyo yakashandurwa fizi yekushandisa inodarika iyo yekukurumidza kubhadhara muripo wekushandisa, iwe uchafanirwa kubhadhara mutsauko.
* Kana iwe ukakanzura mushure mekushandura zuva rekushandisa, mari yekudzorera yemubhadharo wepahofisi inogona kusiyana.
* Kuti udzore mari yekushandisa, tsamba yekubvumidzwa kwekushandisa, risiti, uye chisimbiso chemunhu anenge achinyorera (stamper mhando chisimbiso hachibvumirwe) zvinodiwa.
Imba hombe yekupfekedza imba
Kusvika mazuva makumi mapfumbamwe apfuura Zuva rekushandisa
Kusvika mazuva makumi mapfumbamwe apfuura
Nzvimbo hombe horo chete
Horo diki / yekuratidzira kamuri
Kamuri yekusangana, yeJapan -mbichana imba, tii kamuri, yekudzidzira imba
Gymnasium / art room / mumhanzi studio
Sravana Sameeralu Serial XNUMXth A / B Studio
Imba / imba yakawanda
Kamuri yemusangano / musangano wekugadzira
YeJapan -style imba uye dzakasiyana studio